Ihowuliseyili 2019 inoveli coronavirus Antigen test manufacturers kunye supplier | Immuno
Isetyenziselwe Uvavanyo lwe-2019 yenoveli coronavirus Antigen
Ukupakisha 1 iikiti zokuvavanya / ibhokisi yokupakisha
I-IMMUNOBIO 2019 yenoveli ye-coronavirus Antigen Rapid Test (i-COVID-19 Ag) yindlela ekhawulezayo yokuchonga i-chromatographic immunoassay ekufumaniseni umgangatho wenoveli ye-coronavirus SARS-CoV-2 emqaleni womntu kunye nemfihlo yempumlo.
A. Uvavanyo olukhawulezileyo, imizuzu eli-10-15 ufumana iziphumo zovavanyo
B. Ubuntununtunu kunye nokucaciswa okuphezulu kunama-95%
C. Easy ukuvavanya, akukho mfuneko izixhobo
D. Ngokuchaneka okuphezulu kokubini kweempumlo kunye neSaliva specimen
1. CE / ISO13485 / Uluhlu oluMhlophe
UKUQOKELELWA OKUQHELEKILEYO NOKULUNGISELELA
Uvavanyo lwe-SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (i-COVID-19 Ag) lungenziwa kusetyenziswa imfihlo yomqala kunye nokuvaleka kwempumlo.
● Umqala we-secretions: Faka i-swab engenazintsholongwane emqaleni. Ngenisa ngobumnene imfihlo ejikeleze udonga lwepharynx.
● Ukuphuma kwempumlo: Faka i-swab engenazintsholongwane kumngxuma onzulu wempumlo. Jika ngobunono ujikeleze eludongeni lweturbine amaxesha ngamaxesha. Yenza i-swab emanzi kangangoko kunokwenzeka.
● Ukuqokelela i-0.5ml yesilondolozi sesilingo kunye nendawo kwisitampu sokuqokelela. Faka i-swab kwi-tube kwaye ucofe ityhubhu eguqukayo ukukhupha isampuli entloko yeswabi. Yenza isampulu isonjululwe kwisilinganisi se-assay ngokwaneleyo. Yongeza i-crystal tip kwi-tube yeqoqo yokuqokelela.
Uvavanyo kufuneka lwenziwe kwangoko kwiiyure ezi-2 emva kokulungiswa kwesampuli. Ukuba i-assay ayinakuqhutywa kwangoko, isampulu elungiselelwe kufuneka igcinwe ingagqithi kwiiyure ezingama-24 nge-2-8 ° C okanye iintsuku ezisi-7 ngo -20 ° C.
Yiza nemizekelo kubushushu begumbi ngaphambi kovavanyo. Iisampulu eziqholiweyo mazinyibilikiswe ngokupheleleyo kwaye zixutywe kakuhle ngaphambi kovavanyo. Iimpawu azifanelanga ukuba ngumkhenkce kwaye zinyibilikiswe kaninzi ngaphezulu kwamaxesha amabini. Ukuba iisampulu kufuneka zithunyelwe, kufuneka zipakishwe ngokuhambelana nemigaqo yomanyano egubungela ukuhanjiswa kweearhente ze-etiologic.
1. Yenza ngokwezifiso i-SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (i-COVID-19 Ag) iyafumaneka
2. Uvavanyo lwe-2019-NCOV AG yovavanyo, uvavanyo lwe-IGG / IGM, uvavanyo lweAngtine, uvavanyo lweAnthibody lubonelelwe
3. Ukubonelela ngenkxaso yobugcisa kunye noqeqesho lwemveliso yeeKits zovavanyo ze-2019-ncov
4.Nikezela ngephepha elingenasiphelo kunye nezinto ezibonakalayo ze-COVID-19 Ag test strip
Egqithileyo I-SARS-CoV-2 IgGIgM ye-Antibody Rapid Test Kit yabantu
Okulandelayo: I-2019-NCOV eKhawulezayo yoVavanyo lweeAntgen
Uvavanyo lwenoveli coronavirus Antigen
uvavanyo olukhawulezayo lwe-covid